Malunga nathi-i-Ebei Yidi yokungenisa kunye nokuthengisa ngaphandle kwangaphandle Co., Ltd.
I-HEBEI YIDI YONXIBELELWANO NOKUTHUNYELWA KWENZWE NGOKUTHENGISWA KWENKXASO., LTD
Simi kwi-Anping County, kwiPhondo lase-Hebei, eyaziwa njenge "dolophu yedolophu yocingo." Le nkampani yinkampani yemveliso ehlanganisiweyo evelisa ithengise umnatha we-gabion, umnatha wocingo olungenasici kunye neemveliso zentsimbi ezifakelweyo kwaye ibonelele ngeenkonzo ezinxulumene noko, kwaye ineeseti ezingama-80 zomatshini wokuzoba ucingo olungenasici kunye nomatshini wokufaka. Iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu petroleum, elektroniki, imichiza, ukwenza iphepha, imoto, ukhuseleko kunye namanye amashishini. Aobo, ngaphambili eyaziwa ngokuba Anping panyang wocingo Factory, yasekwa ngo-1998.
Kuyo yonke le minyaka ilandelayo, inkampani izinikele kuphando kunye nophuhliso lweemveliso zentsimbi kwaye iye yaphucula umgangatho weemveliso kwaye yonyusa uluhlu lwemveliso, isoloko iphucula igama lenkampani yethu phakathi kwabanye abasebenzisi nakwimizi-mveliso enxulumene noko.
Okwangoku, iimveliso zethu eziphambili zenziwe ngentsimbi engenacingo, i-stainless steel wire mesh, i-stainless steel crimped wire mesh, i-stainless steel welding wire mesh kunye ne-stainless steel insect mesh. Iimveliso ezandisiweyo zenziwe ngemingxunya yepetroleum; iziqwengana zokucoca ulwelo kunye namaphepha okucoca ulwelo ngerabha kunye neeplastiki; kunye nezihluzi zensimbi ezingenasici.
I-Aobo ihlala ibeka umgangatho wemveliso njengeyona nto iphambili kuqala, inyanzelisa ubugcisa kunye nokuphucula rhoqo umfanekiso wenkampani wasekhaya nowamazwe aphesheya. Sinikezela ngeemveliso zodidi oluphezulu, kunye neenkonzo zobuchwephesha kubathengi basekhaya nabangaphandle. Okwangoku, iimveliso zethu zithengiswa kumaphondo angaphezu kwama-30 e-China kwaye zithunyelwa eMntla Melika, eYurophu, kwi-mpuma ye-Asia, eMzantsi Melika nakuMbindi Mpuma.
Sibambelela "kwinyani, sinenkqubela phambili" kwaye, njengelitye lembombo lenkampani yethu, sisebenza ukuqinisekisa ukuba umgangatho womsebenzi wethu kunye neemfuno zabathengi bethu zihlala zibeka kuqala kuzo zonke izigqibo zethu kunye nezenzo zethu. Siyazingca ngegama lethu lokuthembeka kuko konke ukusebenzisana kwethu nabathengi basekhaya nakwamanye amazwe kwaye siya kusebenza nabo bonke abathengi ukufumana izisombululo zokwenza izinto ngokubaluleka kwazo naziphi na iimfuno zomnatha wocingo.
Sineminyaka engaphezu kwama-20 yamava eMveliso, ukuhlola kunye nokuyila, Sithumela kumazwe amaninzi, iThailand, iUnited States, iBelgium, iEstonia, uMbindi Mpuma, kunye neAfrika.Urhwebo lonyaka olungaphezulu kwezigidi ezili-100. inkampani yethu iye yaphuhliswa kwishishini elithumela ngaphandle kunye nabasebenzi abangama-220 kubandakanywa amagcisa angama-20 kunye neeseti ezingama-80 zoomatshini abaphambili kunye nezixhobo zokuhlola. Ngeli xesha, inkampani yethu yenye yezona zinto zinkulu zenziwe ngeengcingo ezenziwe ngomnatha kubavelisi e-Anping, China. Ngaphezulu kwe-90% yeemveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphandle. Siqhayisa ngetekhnoloji ephezulu yemveliso kunye namava atyebileyo emveliso.
Wocingo Machine olukiweyo
Ikheyiji yethu yelitye enkulu yokuthumela ngaphandle ngaphandle kwemigaqo eThailand eAfrika, minyaka le ithumela ngaphandle ngaphezulu kwe-5000 yezigidi zeedola
Welded wocingo Stock
Wocingo lwethu nge welding
Ukususela ekusekweni kwayo, iqela lethu likhule ukusuka kwiqela elincinane ukuya kubantu abangaphezulu kwama-200, kwaye mveliso ligubungela ummandla 50.000 square metres. Ngo-2019, ingeniso yafikelela kwi- $ 25.000.000. Ngoku siye saba sisikali esithile seshishini, esihambelana ngokusondeleyo nenkcubeko yenkampani yethu:
Umxholo osisiseko "kukuzigqwesa rhoqo".
Umsebenzi woShishino "ukudala ubutyebi, inzuzo yoluntu".
Dare to innovate: the first character is to dare to try, dare to think cinga ukwenza.
Bambelela kukholo olulungileyo: ukubambelela kwinkolo elungileyo zezona mpawu ziphambili zelaser yeJinyun.
Ukukhathalela abasebenzi: unyaka nonyaka, amakhulu ezigidi ze-yuan atyale imali kuqeqesho lwabasebenzi, ikhandlela labasebenzi, izidlo zasimahla kubasebenzi.
Yenza okusemandleni akho: U-Yidi unombono omkhulu, imigangatho ephezulu yomsebenzi, ukufuna "ukwenza wonke umsebenzi ube kumgangatho ophezulu".
Amava: amava amaninzi kwiinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM
Izatifikethi: I-CE, i-CB, i-RoHS, i-FCC, i-ETL, i-CARB, i-ISO 9001 kunye nezatifikethi ze-BSCI.
Ukuqinisekisa umgangatho: 100% uvavanyo lwemveliso yokuguga, 100% uhlolo lwezinto ezibonakalayo, uvavanyo lwe-100% olusebenzayo.
Inkonzo yesiqinisekiso: unyaka omnye iwaranti, ubomi emva kwenkonzo yentengiso.
Ikhonkco lemveliso yala maxesha:izixhobo zokusebenza zemveliso ezihamba phambili, kubandakanya i-gabion mesh workshop PVC wawutyabeka umsebenzi ivenkile